Imbali yelogo yeBatman: ngubani na kunye neelogo eziphambili zembali yayo | Abadali be-Intanethi
imbali yelogo ye-batman
Njengabantwana sasiphupha ngamaqhawe amakhulu okanye amaqhawe amakhulu anamandla kwaye anokukwazi ukusindisa ihlabathi, kunye nokulwa neentshaba zabo ezimbi. Ibali alitshintshanga, kuba uthotho lwabazobi nabayili badibana ngenye imini ukuze benze uhlobo lwesikolo esibalaseleyo, bonke benamandla ahlukeneyo.
Ezinye bezibaluleke ngakumbi kunabanye kodwa ziye zahlala kuyo yonke imbali yoopopayi kunye nesayensi yentsomi njengeyona ilungileyo. Kule post asizanga kuthetha nawe malunga nokuba ngubani oyena mntu ubalaseleyo embalini, kodwa ndicinga ukuba ngomfanekiso esiwubeke ekuqaleni uya kukwazi ukuba siza kuthetha ngabani.
Ukuba ungumlandeli we-DC kunye ne-Batman comics, unethamsanqa, kuba siza kukucacisela ukuba kwenzeka njani lo mlinganiswa, ngenxa yoko, ilogo yommeli wayo.
1 ngubani u-batman
1.1.2 Imbonakalo yomzimba
1.2 dc amahlaya
2 uphawu lwe batman
2.1 Iimpawu zokuqala
2.2 isimboli emthubi
2.3 Amaxesha anamhlanje amaninzi
3 Abanye abalinganiswa beDC
3.2 Umfazi ogqwesileyo
3.4 Ukukhuthaza iGolide
Umthombo: INkundla yamaNgesi
Kwimeko apho ungumntu othanda iMarvel kune-DC kwaye awukamazi ukuba ngubani uBatman, siza kukunika intshayelelo emfutshane malunga nomlinganiswa ukuze umazi kumntu wokuqala.
U-Batman uchazwa njengomnye wabalinganiswa abamele kakhulu, singasathethi ke ngoyena ummeli we-DC ye-comic book saga. Yadalwa ngonyaka we-1939 ngothotho lwabazobi abagama linguBill Finger kunye noBob Kane. Inkangeleko yakhe yokuqala yenzeke kumdlalo ohlekisayo weDetective Comics kwaye ukusukela ngoko, uye wagcwalisa phantse onke amaphepha kunye neethiyetha bhanyabhanya kwihlabathi liphela. Akunzima ukungahambi kakuhle njengoko egcina ubuntu obumnyama ngokupheleleyo obuhambelana nesinxibo sakhe. Kodwa ukuze simazi ngcono, siza kugqabaza kuthotho lweempawu malunga noBatman ezinokuba nomdla kuwe kwaye ngokuqinisekileyo ziya kukukhokelela kuye ngokukhawuleza okukhulu.
Njengoko sele sichazile ngasentla, Batman igcina ubuntu obuntsundu ngokupheleleyo. Xa sithetha ngento emnyama sithetha ukuba inomlinganiswa onamandla, umlo nongenakoyiswa. Kuyo yonke imbali yayo, ibonakaliswe njengomlindi ngokuchasene nabangendawo bayo boyikeka.
Udla ngokuba ngumlinganiswa onzulu, asizange simbone onwabile okanye ehlekisayo. Phezu kwako nje konke oku kunzulu, uboniswa njengomlinganiswa onobubele obuthile njengoko engabonakalisi bubi phambi kwabanye abalinganiswa bakhe. Eyona ndima yakhe yeyokuba yinkokeli. ngoko iye yaba yinkwenkwezi yazo zonke ii-comics.
Ngokuphathelele inkangeleko yakhe yomzimba, sigxininisa ukuba uBatman Uchazwa njengendoda ende nedlamkileyo, igcina imbonakalo emnyama neyoyikekayo phambi kwakhe nawuphi na omnye umlinganiswa ohamba naye. Ngokuqhelekileyo unxibe i-gray kunye nohlobo lwelogo kunye nelulwane elimele phakathi kwesifuba sakhe. Kwakhona unxibe ihood emnyama egquma isiqingatha sobuso bakhe kwaye iinwele zakhe zihlala zimnyama kwaye zimfutshane zinamehlo amdaka. Ngamafutshane, imbonakalo yomzimba eqhelekileyo ye-superhero.
Ukuba usazibuza ukuba yintoni na iicomics zeDC, uchazwa njengesifundo okanye mhlawumbi umvakalisi osuka eUnited States waza wasekwa malunga nonyaka we-1937.. Ii-initials ze-DC zibhekisa kwi-Detective Comics, isihloko sokuqala ebesiyinxalenye yomfuziselo wompapashi.
Ngamafutshane, yenye yezona nkampani zibalaseleyo zamabali enzululwazi kwihlabathi. Kwaye sinokufumana abalinganiswa abaphindaphindiweyo nababalulekileyo ezifana Batman, Superman, Wonder Woman, The Justice League okanye Flash okanye Green Lantern ngokwakhe.
Okwangoku ikhuphisana nenye imbangi yayo, iMarvel Comics, ekwaseNew York. Kwaye ukuza kuthi ga ngoku, bazalise iithiyetha bhanyabhanya iminyaka emininzi.
uphawu lwe batman
Umthombo: Turbologo Logo Maker
Inguqulelo yokuqala yelogo yeBatman yavela ngo-1939 kwakwicomic efanayo yeDetective Comics. I-logo yenzelwe omnye umntu ngaphandle kukaBob Kane kwaye yaba nefuthe elikhulu ngokusebenzisana noBill Finger. Isimboli sokuqala sibonakaliswa ngoyilo oluncinci kakhulu. Ekubeni isimboli ngokwaso saqala ukusuka kwisiseko sokuba yilulwane enentloko encinci apho uchungechunge lweendlebe luyijikelezile kwaye apho amaphiko abonakala ebanzi kakhulu. Ngaphandle kwamathandabuzo enye yeenguqulelo ezilula.
Emva kweminyaka engama-25 usebenzisa uphawu oluncinci lwelulwane. Ngomnyaka we-1964, umvakalisi uJulius Schwartz kunye noCarmine Infantino bahlengahlengisa zombini i-suit kunye nesimboli esitsha. Ngale ndlela, isimboli yangaphambili eyenzelwe nguBruce Wayne yayiza kuthatha ifom entsha kunye nemvelaphi ephuzi. malunga nomzobo wesilwanyana esibonakalisa kakhulu.
Impembelelo yolu hlaziyo ngokutsha yayinkulu kangangokuba yafikelela ekudumeni kwayo okuphezulu kwaye abalandeli baqala ukuba nomdla ngakumbi malunga nokuba kuzakwenzeka ntoni kulo mlinganiswa. Ngale ndlela, isimboli esitsha sawela amawaka kunye namawaka ezikrini.
Amaxesha anamhlanje amaninzi
I-logo yeCarmine yahlala isebenza kwiminyaka engama-34 elandelayo. Kodwa ngokufika kwamva nje kwe-comic entsha ye-Batman, isimboli ye-Batman yathatyathwa kwakhona ngaphandle kwaloo mvelaphi imthubi embonakalisa kakhulu. Yayiyinguqulelo entsha eyilwe nguBatsy kwaye yavela kwimixholo nganye eyahlukeneyo yefilimu yabalinganiswa, leyo uChristopher Nolan wayenoxanduva lokuyila.
Ngaphandle kwamathandabuzo, akukho mathandabuzo ukuba ukuza kuthi ga ngoku, Isimboli seBatman senze utshintsho olubalulekileyo kwimbali yayo, kwaye eyona nto ingcono kukuba oku akupheli apha.
Okwangoku, Kukho iilogo ezingaphezu kwe-30 zeBatman ezihluke ngokupheleleyo omnye komnye. Ngamnye kubo ube ngumxholo wokugxekwa okuninzi ngabalandeli kunye namalungu e-DC amahlaya. Kodwa ngaphandle kwamathandabuzo, phakathi kweelogo ezingaphezu kwama-30 ezikhoyo, kukho enye ethe yagqama ngokupheleleyo. Kwaye ngaphandle kwamathandabuzo yayiluphawu olusetyenzisiweyo kwinqanaba lokuZalwa kwakhona kweBatman, kuba ilungelelanise kakuhle i-hue etyheli yangasemva kwaye yalujika lwaba luphawu oluhle olunomda walo, ngaphandle kwamathandabuzo uyilo olunomtsalane.
Abanye abalinganiswa beDC
Idemon ngomnye wabalinganiswa abayinxalenye yeDC. Igama lakhe elikhethekileyo ngu-Etrigan owaziwa ngokuba yiDemon. Ungumlinganiswa owenziwe nguJack Kirby. Umlinganiswa ubonakala ngokuba yidemon engqongwe ngabalinganiswa abalungileyo. Unamandla afanayo afana nokukwazi ukuvuselela kwakhona, amandla ngomlingo othile kunye ne-telepathy kunye nokungafi, okumenza abe ngomnye wabalinganiswa ababalaseleyo.
I-Superwoman ichazwa njenge-superheroine eyinxalenye kwaye ihamba kunye namahlaya amaninzi e-DC. Inguqulelo yakhe yokuqala yavela ngonyaka ka-1943. Igama lakhe kunye nesinxibo sakhe ziyafana nekaSuperman. Oku kungenxa yenguqu encinci kwibali lencwadi yamahlaya. Ungumlinganiswa omandla akhe asekelwe ekuguquleni amandla elanga abe yi-electromagnetic energy, kwaye uyakwazi ukuwenza atshintshe okanye aguqule la mandla aze awafunxe. Ngaphandle kwamathandabuzo, ungumlinganiswa oye waneziphumo ezininzi kwiminyaka yokuqala yesaga yencwadi ehlekisayo kwaye ukwaphezulu njengomnye obalaseleyo.
UMera waziwa njengomfazi ka-Aquaman. Kwii-comics ze-DC, uyi-superhero elwa nomyeni wakhe kwaye babonakaliswe ngokwabelana ngamandla afanayo. Uzibona eqinile kwaye unesakhono esikhulu, umzekelo, amandla okuphilisa, amandla amakhulu amvumela ukuba atshabalalise iintshaba zakhe, ukhawuleza kakhulu kwaye ukwangamanzi, unamandla okuguqula amanzi nokudala izinto ezinokutshabalalisa iintshaba zakhe. Ngokungathandabuzekiyo ungomnye wabona bantu babalaseleyo.
I-Booster Gold ngomnye wabalinganiswa abaye banempembelelo enkulu kuyo yonke imbali ye-DC Comics. Ibali lakhe libuyela ekubeni ngumdlali webhola lebhola kwixesha elizayo oweba uhlobo lomsesane, ibhanti elinamandla kunye nerobhothi. Udibanisa zonke ezi zinto azibileyo kwaye abe yi-superhero enamandla.
Ngokungathandabuzekiyo ungoyena mlinganiswa oye wagqama kakhulu ngenxa yesakhiwo sebali lakhe kunye nendaleko yakhe, ukwangomnye wabalinganiswa abathe batyhubela uninzi lotshintsho.
Ngokuqinisekileyo sele uyazi ukuba ngubani uBatman emva kokufunda isithuba. Ngokuqinisekileyo uya kumangaliswa yindlela abaphumelele ngayo abalinganiswa be-DC kuyo yonke imbali. Kukho abalinganiswa abaninzi abayinxalenye yolu hlelo, kodwa uBatman ebesoloko ekho, kunye noSuperman, oyena ubalaseleyo kwixesha elitsha.
Ezi superheroes ziya kuhlala zihamba nathi kude kube sekupheleni kwembali yabo kunye neyethu, ngoko kubalulekile ukuba ufunde ngakumbi ngabalinganiswa babo kwaye ube ngumlandeli wokwenyani wale saga esele ikwi-elite ye-cinema iminyaka kunye ne-comic.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » imbali yelogo ye-batman
Iiprogram ezingcono zokubuyisela ifoto